Inkastoo waxyaabaha Adobe qabsato suuqa ganacsi, kuwa ku miisaaniyad yar ama raba wax yar ka duwan waxaa jira wax soo saarka badan oo tayo sare leh oo diyaar u ah Linux, kuwaas oo qaar badan ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo nidaamka liisanka furan GNU iyo sidaas oo qiimo u cajiib ah oo bilaash ah!
# 1. Xabad Open
Malaha mashruuca isha ugu firfircoon horumariyo furan waxaa adduunka video tafatir ah, Openshot leedahay cajiib ah feature oo ay ku jiraan siyaabo fudud in ay ku daraan xubno badan oo horumarsan sida ay saamayn Ken Burns u mideysan weli images galay filim, a editor horyaal oo si buuxda u ciyaaray iyo taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab video.
Loogu talagalay HD video ka dhulka iyo ilaa Openshot dhiman in qaar ka mid ah xubno farsamo xirfadle u baahan kartaa, laakiin sida la soo koobay, fududahay in la isticmaalo xirmo waxay ka dhigan tahay sheyga ugu wanaagsan waxaa inta badan isticmaala.
Badan oo ku saabsan Xabad Open Baro >>
Waxa kale oo mashruuca il furan, Pitivi waa mashruuc bulsho-driven ah in si firfircoon ee la sameeyey, waxaa uu diiradda saarayaa geynta iyo qoreysa hanaanka horumarinta design keentay in bixisaa gaar ah oo dareen leh interface ah user in u ku habboon yahay dadka cusub iyo xirfad video tifaftirayaasha labadaba.
Waxaa ka mid ah tiro balaadhan oo ah kala guurka iyo saamaynta, oo qoreysa waqtiga dhabta ah falinjeeerka iyo maaraynta hantida iyo qalabka waqtiga lagu badbaadinayo kale. Ku dhisan waqtiga framerate-madax-bannaan ah, Pitivi ma ahan oo kaliya fududahay in la isticmaalo, waxa uu feature cajiib ah u dhigay ka danbeeyaan interface ka Begovic.
Baro wax badan oo ku saabsan Pitivi >>
Waxa kale oo editor video aan toosan ee horumarka firfircoon, Shotcut ayaa feature wanaagsan hadda la fadhiisiyo meel intan ka sii cajiib ah mid la qorsheeyay fulinta, oo ka dhan dhisay on a user aad interface saaxiibtinimo ka dhigaya barnaamij gaar ahaan tan raaxo ah si ay u isticmaalaan.
Baro wax badan oo ku saabsan toobiye >>
Siinta toolset aasaasiga ah, Avidemux aan u tahay qof kasta, si kastaba ha ahaatee u xirmo yar oo raad loogu talagalay si ay ula qabsadaan tiro balaadhan oo ah dejinta iyo dhoofinta qaabab waxay bixisaa hab wax ku ool ah in la sameeyo tafatir aasaasiga ah xitaa kuwa leh waayo-aragnimo dheeraad ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Avidemux >>
Mid ka mid ah ugu dheer socda mashaariic il furan halkaas, iyo baakada video tafatirka ugu bisil ee Linux, Cinelerra markii ugu horaysay la sii daayay sanadkii 2002, iyo horumarka joogta ah ka dibna ka ayaa ku hadhay safka hore ee technology video tafatirka tan iyo weligeedba.
Cinelerra waa xirmo Cawaysimina idinkoo lahayn si buuxda u saftay xirfadle in si buuxda u taageersan HD, Ultra HD iyo qaabab audio tayo sare leh. Waxaa laga yaabaa inay tahay sida aan user saaxiibtinimo sida qaar ka mid ah halkaas, laakiin waxaa ka maqan waxba laga eego sifooyinka, iyo waxa u caambaaraynaynaa Guddiga soo bandhigay sida xirmo xirfadle kuwa leh qaar ka mid ah waayo-aragnimo ee beerta video tafatir ah. Wixii kuwa heli kartaa talanti oo ay dad badan oo Cinelerra waa sida awood sida xirmo kasta oo ku saabsan suuqa oo si gaar ah xusid u awoodda markii xirmo animation Qase ku soo aadeen.
Baro wax badan oo ku saabsan Cinelerra >>
Il furan, xirmo video tafatirka aan toosan, marka hore la sii daayo waqti la mid ah Cinelerra waxaa qaybsada diiradda ku ah set feature cajiib ah oo waafaqsan.
Weli horumarinta firfircoon, Kdenlive kor u bixisaa in software taariikhda iyo taageero kala duwan oo ka mid ah qaababka, Kdenlive waa doorasho weyn sida xirmo dhexe u lahayn qaababka xirfad leh qaar ka mid ah, laakiin weli waa ballaaran ku filan si ay ugu adeegaan uu u baahan yahay inta badan, halka iyagoo wax yar ka sahlan inaad xoog iskaga xajisid badan qaar ka mid ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Kdenlive >>
# 7. Ku nool yahay
Ku nool yahay wax soo saarka ah oo lacag la'aan ah, laakiin ha nacas tag qiimaha aad, tani waa wax soo saarka heerka dhab ah xirfadle in isku daraa dhabta ah markii video qaab la tafatirka aan toosan ee xirmo hal. Waxaa loo adeegsan karaa labada video tifaftirayaasha iyo VJ iyo ogolaataa user in ay isku daraan clips isticmaalaya tabo gaaban keyboard in waqtiga dhabta ah, iyo qoreysa editor sare multitrack isku soo clips si ay u sameeyaan track shaqaynaysa hal, ay ka mid yihiin awood u leh inay u qoraan in waqtiga dhabta ah iyo markaas ka bedel lagu qoro, ama si toos ah u abaalmarin.
Badan oo ku saabsan noloshooda Baro >>
Tani waa qawl wax yar ka duwan dadka kale halkan, ee in ay jiraan laba nooc, mid gebi ahaanba bilaash ah iyo xirmo ganacsiga loo yaqaan 'Pro'. Farqiga madax ka dhexeeya labada waa in version xorta ah la xadiday in wax soo saarka archives ay lahaansho iyo web / YouTube kaliya (at xal 720p), halka version pro u ogolaanaya wax soo saarka ee buuxa HD ama ka baxsan, DVD, Bluray iyo Koox ka mid ah noocyada file sidoo kale. Pro version ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah taageerada ay u Blackmagic iyo AjA, laakiin inta badan oo inaga mid ah xayiraad saarka uu noqon doono farqiga u dareemi. Labada qeybood oo si buuxda u ciyaarin marka ay timaado tafatirka, iyadoo set feature dheer oo awood u codsiga wax xirfad loo baahan yahay, oo waxaa loogu isticmaalaa warshadaha filim Hollywood.
# 9. Flow Blades
The kid cusub Mucjizaad on block la horumarka keliya 12 bilood ka dambeeya, Flowblade waa mashruuc kale oo u furan il ayaa lagu samaynta hirarka duurka. Mix A xariif ah ee xog cusub iyo multitrack tafatirka sameeyo Flowblade rajo xiiso laga yaabaa in haysan wax yar u user xirfadeed laakiin ka badan intii ku filnayd in badan, iyo feature One oo ay tahay xawaaraha.
Baro wax badan oo ku saabsan Flowblade >>
Ugu dambayn waxaan heysanaa Open Movie Editor, oo halka ku koobnayn in baaxadda waa wax soo saarka aad u fiican si kastaba ha ahaatee. Software ayaa loo soo saaray in uu noqdo mid fudud in la isticmaalo, iyo sida oo kale waxaa ka maqan qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah oo casri ah oo kuwa kale halkan u ciyaarin, laakiin kuwa si fudud u raadinaya xirmo tafatirka video aasaasiga ah ah, kaasoo aan weligiis u baahan kartaa qalab badan oo horumarsan matalaa ah hordhaca haboon.
Horumarinta u muuqataa inay hakad on this tiro ka mid ah sano ka hor, si kastaba ha ahaatee waxaa sameeya wakiil tallaabo fiican ugu horeysay adduunka video tafatirka ugu soo galay oo waa xirmo ugu fudud ee waxaa isticmaali baxay, oo sidii oo kale ayaan ku dareemayaa waxa uu leeyahay meel liiskan.
Baro wax badan oo ku saabsan Open Movie Editor >>
Kor ku xusan waa tutorial aasaasiga ah ee Adobe jilitaankii, haddii aad tahay oo kaliya bilaabayso of software video tafatirka, waxaad bilaabi kartaa iyadoo Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , kaas oo awood leh, laakiin si sahlan loo isticmaalo gacmo cagaaran. Download version ku raad free hoos ku qoran.
> Resource > bedelan karo > Top 10 Linux lagu bedelan karo Adobe jilitaankii